Global Voices teny Malagasy » Iokraina: “Nasionalista Iokrainiana miteny rosiana” · Global Voices teny Malagasy » Print
Iokraina: “Nasionalista Iokrainiana miteny rosiana”
Voadika ny 25 Febroary 2009 12:54 GMT 1	 · Mpanoratra Veronica Khokhlova Nandika Koloina RAMASINANDRO
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Okraina, Rosia, Fanabeazana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Fiteny, Foko sy Fiaviana, Haisoratra, Politika
Tafapetraka ao anatin’ny listra faha-4 malaza indrindra ao amin’ny Yandex Blogs ireo izay tafiditra ao anatin’ity bolongana ity (RUS), bolongana iforonan’ireo tsikera an-jatony. Manazava etoana ny dikan’ny hoe “Nasionalista Iokrainianina miteny rosiana” ny mpampiasa Li antsoina hoe alek-ya:
Sarotra ny mino fa tena misy tokoa izany, kanefa misy ny olona. Anisan’izany ny tenako, raha afaka mba milaza aho.
*Ireo izay mandany ny fiainany manontolo miresaka amin’ny teny Rosiana ireo olona ireo, kanefa mihevi-tena fa Iokrainiana ry zareo ary heveriny fa i Iokraina dia ny tany fiahavian’izy ireo.
*Tsy dia mivaky loha ny mamadika ny teny ifandraisana amin’ny olon-kafa hifampiresana izahay: anananay ny namana avy any amin’ny faritra maro eto amin’ny firenena.
*Rehefa mankany ivelany izahay ary manontany ny olona hoe: “avy any Rosia ve ianareo?” dia valianay hoe, “Tsia! Avy any Iokraina izahay.”
*Fanontanina iray hafa: “inona no tenin-drazanareo (tenim-pirenena)?” homenay ny valiny hoe, “teny anankiroa hainay: teny Iokrainianina sy teny Rosianina”
* Rehefa avy mijery sarimihetsika izahay dia sarotra ny mitadidy hoe inona moa ny teny nampiasaina tao anatin’ilay tantara teo, Rosianina ve sa Iokraininina?
*Misy karazany telo ny tinendry teny (clavier) ho an’ny solosaina: Ї [UKR], Ы [RUS], S [ENG]
*Faly tokoa izahay manana ny zanakay mianatra any amin’ny akanin-jaza sy sekoly [teny]Iokraininina.
*Ny fihetsika masiaka avy amin’ny mpitondra Iokrainianina sasany no manosika anay vaolaohany indrindra hianatra ny teny Iokrainianina satria mampatahotra ny olona ny ho tafatsoaka tsy ho anisan’ny olona Iokrainianina intsony.
Ho anay, [Taras Shevchenko ], [Ivan Franko ], [Les’ Kurbas ] (tsy ho tapitra ny listra) dia [zava-dehibe] toy i [Mikhail Lermontov ], [Aleksandr Pushkin ], [Mikhail Bulgakov ] ihany koa izahay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/02/25/1684/
 ity bolongana ity: http://alek-ya.livejournal.com/1280824.html
 Taras Shevchenko: http://en.wikipedia.org/wiki/Taras_Shevchenko
 Ivan Franko: http://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Franko
 Les’ Kurbas: http://en.wikipedia.org/wiki/Les_Kurbas
 Mikhail Lermontov: http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Lermontov
 Aleksandr Pushkin: http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Pushkin
 Mikhail Bulgakov: http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Bulgakov